Maxaad ku sameynaysaa ninka aan weligiis ka tegin?
Mararka qaar ragga ayaa si lama filaan ah uga baxa nolosheena oo aan sharaxaad lahayn. Miyaad habeenkii wadaagtay, miyaad la kulantay hal bil ama wada nooleyd nuskii noloshaada - maaha arrin. Marka uu u socdo cusbo oo la waayo. Miyuu soo noqonayaa? Iyo in ay lagama maarmaan tahay in la sugo? Maxaad ku samaynaysaa ninka aan waligaa kaa tagin?
Waxay ku noolaadeen si farxad leh ka dib. Isaga oo ku riyooday badda, tan iyo markii uu caruurnimadiisa ahaa, wuxuu ka shaqeeyay waaxda bada ee marki uu shaqadii ka lumay. Anigu ma aan helin shaqo ku takhasusay khibradeyda, waxaa iigu gooyey dakhliga shilalka ah. Xaaskeyga ayaa bilaabay inay arkaan, waxay yiraahdaan, shaqo aan wanaagsaneyn, majirin lacag khatar ah. Laakiin, guud ahaan, wax walwal ma ahayn. Gabadhayda ayaa koray. Markii ay sugayeen martida. Wadajir waxay nadiifiyeen oo diyaariyeen dhammaan noocyada kala duwan. Oo waxaa jiray guryo aan cusbayn. Wuxuu qaatay wax yar oo wax yar oo dukaanka u socda - si deg deg ah, ilaa uu saaxiibbadiis yimid ... Bil ka dib wuxuu helay telegram ka soo jeeda jasiiradaha qaar. Sharraxaadda muddada dheer waxay ahayd mid yar la fahmi karo: Waxaan la kulmay saaxiib uurkiisa oo ah ciidan, mid si dhakhso ah loogu baahan yahay hagaha. Markabka ayaa ka baxay habeenkii. Sababo kala duwan, wuxuu ku laaban karaa guriga hal sano iyo badh ka dib. Inta lagu jiro waqtigan, waxay u isticmaaleen si isku mid ah si kale. Waxay doonayeen inay furaan. Laakiin waxay go'aansadeen inay sugaan qolka cusub: waxay ku tiirsaneyd qoys seddex qof ah, laakiin aan ka ahayn laba. Diiday. Ka dibna way ku lug lahaayeen. Oo waxay go'aansadeen inaysan furi karin. Oo waxay ku nool yihiin sidan. Sheekadu waxay la socotaa lumitaankiisa degdega ah waxaa loo sheegi karaa in ay tahay wax la yiraahdo - oo ah mid aan la fileynin. Waxaa jira shuruudo badan oo muhiim u ah ragga, waajibaadka, ballanqaadka, jacaylka dumarka iyo waxa u muuqda dareen caadi ah. Tusaale ahaan, is-u-helitaankiisa. Ama dhibaatooyin dhexdhexaad ah. Ka dib oo dhan, naftiisa iyo dareenka isbeddelka ah ee farxad. Waa arrin xiiso leh in dhammaan arrintani ay ka muhiimsan tahay jacaylkaaga, laakiin ma joojiso. Waxa uu aad uugu jeclaan karaa - si qoto dheer iyo si gaar ah. Sheekada ku saabsan mira dhalada ayaa la isku daraa. Midda ugu muhiimsani waa fursada degdegga ah ee is-wax-u-qabsiga, taas oo ah qofku illoobo wax kasta oo adduunka ah. Laakiin booska labaad ayaa ah kaliya raba inuu ka farxiyo xaaskiisa - inuu shaqaysto lacag, si looga fogaado cayda ... Xitaa qolka furitaanka waa in ka badan - iyada iyo gabadheeda. "Waxan arkayaa ujeedada, ma arko caqabado," - macquul ahaan lab ah. Burburinta degdegga ah iyo kuwa aan la iska tuurin waxay kudhufeysaa shoog. "Ma i jecla, laakiin xitaa xitaa kuma dhiirranaan inuu si toos ah u sheego!" - tani waa kan ugu horreeya (oo had iyo goor uun ah) waxkastoo maskaxdeena ku yimaada.
Ma rumeyn doontid, laakiin runtii aad ayay u fududahay nin inuu dagaal galo ama ka badbaadiyo mid ka mid ah afduubka afrikaanka ah marka loo eego inuu si daacad ah ula hadlo gabar. Kuwani waa sifooyinka jinsiga ee maskaxda: waxay leeyihiin xarun afka ah oo caadi ahaan aan ka yareyn tan aan haysano. Doonista in ay sharaxdo oo aqbalto sharraxaadda, in la fahmo oo la fahmo waa hanti qalafsan. Ninkaas kiiskan badanaa waa bilaash. Waa muhiim in uu ogaado: waxa uu sameeyo waa sax. Dhammaan inta hartay - faahfaahinta, ma aha mid u qalma ee uu fiiriyo iyo garaacaan koorsada. Iyo, si kastaba ha ahaatee, sababaha caleemaha aamusnaanta ayaa aad uga duwan kan aan jeclayn iyo cabsida wadahadalka. Iyo qaar ka mid ah iyaga ayaa xitaa laga heli karaa fahamka waxayna ku xiran yihiin cafis. Halkan, tusaale ahaan ...
Waxaa laga yaabaa inuusan ka cararin dhammaan. Oo isna wuxuu tegey inuu u soo iibsado ubax, wuxuuna u galay bilayska si uu u dagaalamo. Ama badbaadiyey cunugga eyga oo hadda ku jira isbitaalka. Ama uu ka lumay xasuustiisa oo uu lumay jidka. Wax kasta way dhici karaan ... Marka hore, isaga ku soo wac telefoonka. Ma aha xaqiiqda ah inuu telefoonka soo qaado. Laakiin haddii ay sidaas tahay, waxaad ugu yaraan ku qancin doontaa in qofka aad jeceshahay uu nool yahay. Haddii uusan qaadan ama taleefan la gooyin, wac saldhigga boliiska, xafiiska diiwaangelinta shilalka, isbitaallada, riwaayadaha, asxaabta, guryaha iyo bandhigyada. Dhacdadan banal-kinoshnogo ah looma diidi karo. Si lama filaan ah ayaa musiibo u dhacday qof jecel? Suurtagalnimada waa in la dhigaa. Laga bilaabo bilowga hore.
Mararka qaar raggoodu way baaba'ayaan iyada oo aan la sharaxin, sababtoo ah ... waxay u malaynayaan inay wax walba sharxeen. Aynu sheegno in sanado badan fikrad uu u bislaaday - tusaale ahaan, waa lagama maarmaan in la badbaadiyo belka ee Antarctica ama qiyamka qoyskooda dhaqameedku waa la soo dhaafay. Wadahadalka guduhu wuxuu soconayaa wakhti kasta. Waa mid aad u sarreeya oo dhab ah in ninku uu dareemayo in gabadhiisu ay fahmayso wax walba. Laakiin sidee kale waa haddii uu ka fikiro waxa ku saabsan 24 saacadood maalintii! Xoojinta wadahadalka aamusnaanta ayaa beddelaya wada hadalka dhabta ah. Marka uu gaaro karkarinta gudaha, ninku wuxuu go'aansadaa inuu baxo. Wixii isaga ah, sii-dheereyn la sugayay, sida haddii laga soo galo qolalka firfircoon, wuxuu ugu dambeyntii tagay hawada cusub. Ma jiraan wax xaddidan farxadiisa. Wuxuu ka fikiray arrintan muddo dheer, diyaarisay, riyooday, sugayay. Oo sidaasaa waxaa dhacay! Wuxuu go'aan ka gaaray. Waa lacag la'aan. Wuxuu ku qanacsan yahay go'aanka. Waa uu faraxsan yahay. Halkee ayaan runtii ka feker karaa qof aan la noolaa? Marka la eego farxad, qofku had iyo jeer waa kelidiis.
Anigu waxaan la kulmay saaxib, waxaan u tegey cabitaan, waxaan bilaabay inaan ku degdego. Mar dambe ma xasuusto meesha iyo sababta uu u socdo, iyo xataa si ka badan sidaas - cidda iyo waxa ka hadhay. Dareen-celinta noocan oo kale ah ayaa si gaar ah u ah dadka dareenka ah ee aan la joogin, oo aad u faraxsan, iyada oo aan lahayn is-xakamayn cad. Kacaanka koowaad ee kudhaca mid ka mid ah qofka sida waxaa lagu ciyaara dareenka. Marar badan way baxaan, oo ay qaataan mulkiilahooda meel ka baxsan rabitaankiisa gaarka ah. Marka dareenka la gubo, fursadaha waa ay sareeyaan in qofku ku laaban doono meesha uu ka tagay. Haddii kaliya uu wax walba oo kale uusan weli madax adageyn. Haddii aad ku nooshahay ama kula kulantay geesiga caynkaas oo kale ah, maaha inaadan aragto astaamaha astaamaha. Si kastaba ha noqotee, noocyo kala duwan oo habdhaqan ah ayaa sidoo kale laga helaa shakhsiyaadka marka ugu horeysa ee gaaban oo aan aheyn dareen ahaan. Taasi waa, nolosha caadiga ah waxay kaloo yihiin dad caadi ah - dadka sida dadka. Laakiin xaalad kasta oo aan caadi ahayn waxay ku dhejin kartaa dhamaadka dhimashada, geli goyska. Dabadeed ninka ayaa si degdeg ah u lumiya doonistiisa, oo wuxuu ku dhuuntaa socodka. Sababaha ayaa ah mid aan qallafsanaan lahayn xagga dareenka, is-xakameynta daciifka, dareen-celin. Mar hadiiba, wax waliba waxaa go'aansaday waalidiin-hooyooyin, markii ay si lama filaan ah u jireen Borya ama Petya, isaga ayuu raacay caado aan weligeed la kaxeyn. Markuu idinla socdo, wuu fiicnaaday oo wuu kugu farxay. Laakiin tani waa nooca caadiga ah ee jawaabta, markaa ha la yaabin.
Nolosha nadiif nadiif ah - ma aha wax la yaab leh, dhab ahaantii? Isagu ma uusan sameynin muddo dheer, oo isagu ma uusan la xiriirin kuwaas, halkaasna uma uusan tegin. Taasina way dhacday. Waxaa jira fursad ay ku beddelaan nolosha iyo inay sameeyaan, ugu dambeyn, waxa loo abuuray. Wuxuu markaa (marka ay wax walba xalliyaan) si ay kula soo xiriiraan oo ay kula xiriiraan, sida haddii aan waxba dhicin. Guiltaanku ma dareemayo, sababtoo ah hab kale oo uu isagu isma kici kari waayey (oo tani waa waxa ugu muhiimsan!), Si fudud uguma soo baxin. Oo isagu yuusan kaa cararin, laakiinse wuxuu ku shaqeeyaa cadhadiisa iyo dulqaadasho badan. Waa maxay cayda! Wuu idin jecel yahay. Oo waxaad jeceshahay xasilloonida, sida dumarka oo dhan, sidaa darteedna aadan weli ogolaanin inuu baxsado.
Isku dhaca shakhsiga. Daalidda ka timaadda masuuliyada iyo qaab nololeedka caadiga ah. Garbaha waxay hoos u dhacaan miisaanka dhibaatooyinka maalinlaha ah iyo deymaha, dhibaya fikradaha impermanence iyo macnaha aan macnaha lahayn ... Qof ayaa hoos uga soo baxaya, sida ka hoos daboolka ah, oo uu bilaabo nolol aan caadi aheyn. Badanaa sababahan awgood, nimanku waxay noqdaan hoy la'aan ama khamriga. Laakiin had iyo jeer maahan. Dhab ahaan, hoos u dhac aad u ballaadhan maanta ayaa ah arrin la mid ah amar isku mid ah.
Dadkii 40-jir ah waxay u muuqdaan kuwo adag oo naadi ah. Hase yeeshee, xitaa intooda badan lama saadaalin karo dhalinyarada. Gudaha - falanqaynta iyo dib-u-eegista qiimaha. Ka baxsan, timo madow iyo maqaarka. Bulshada dhexdeeda - waa dheelitirnaan muuqata oo heer sare ah iyo hawlgab lacag ah. Taas oo ah, dhibaatadu waxay saameyneysaa dhammaan dhinacyada shaqsiyaadka - jir ahaan, maskax ahaan, bulsho. Qofka ugu horreeya ee saboolka ah iyo kuwa saboolka ah ayaa ah, in yar oo ay leedahay dhibcaha taageerada inta lagu jiro xiisadda oo ay aad u halis badan tahay waqtigan ayaa loogu talagalay. Iyo, si tartiib tartiib ah, goobaha kala duwan ee isgaadhsiinta iyo danaha ee qofku, waxay u badan tahay inuu helo wax uu ku tiirsanaado marka qaybo ka mid ah noloshu ay su'aal tahay. Ragga badan, dhibaatadu waxay u egtahay musiibo. Wuxuu ka baxayaa uun sababtoo ah ma ogeyn waxa la sameynayo marka xigta. Waxay u baahan yihiin in ay wax ka bedelaan si deg deg ah si aysan u noqon waalid. Sidee looga tagaa? Dabcan, aamusnaanta! Noloshu waxay hoos u dhacdaa - ha ku jiidin sida aad jeceshahay (ma ahan wax dhib ah haddii ay ku saabsan tahay xaaska aad ku nooshahay 20 sano, ama gabadha uu la kulmay dhowr toddobaad ka hor). Waxaa jira fursado dib u noqosho haddii aadan ka diidin fursaddan oo kale.
Dhibaatada ka imanaysa aargoosiga wuxuu u eg yahay ragga ka jira heerar kala duwan oo ah podkabluchnosti. Diiqad leh lover neceb, guulaysto ama jilicsan, ama muddo dheer ku xiran tahay (khariidad, lacag, xiriiro), nin waa in ay adkeeyaan badan. Oo hadda waxay timaaddaa waqti isaga oo fursad u leh inuu ka baxo daryeelka. Qadarka ku qanacsanaanta ee ku qanacsan waxay galeysaa tayada shaqada. In lagu qubaysto sunta tamarta badan ayaa soo ururay, in ay rabaan in ay u tuuraan qof si naxariis daro ah oo adag, taas oo keenaysa inay xanuunka hore ee faa'iidada xanuunka. Dhibaatada aadka u daran waa iyada oo markhaati ka ah bani'aadamnimada aadanaha iyo labka nin. Noocani noocan oo kale ah waa mid yar, oo buuxa qolalka gudaha, dabeecadda xanaaqsan iyo dabeecad xun. Sideed u aragteen tan kahor?
Qofka kale ee ka tagaya waa farxad aad u weyn, taas oo aan doonaynin in ay wax walba iska ilaaliyaan. Hadal kasta oo ku saabsan tani waa mid aan fiicneyn oo xitaa khatar u ah wanaagga uu hadda ku nool yahay. Niyad-jabka? Dabcan! Taasina waxay noqon kartaa in iyada, iyada oo kale, kan kale, wuxuu u dhaqmi doonaa dhamaadka si isku mid ah. Hase yeeshee, wax haysan maayo wax intaas ka badan.
Mararka qaarkood ragga waa kuwo sharaf leh (sida ay u malaynayaan) inay baaba'ayaan, si aanay u dhibin dumarka. Tusaale ahaan, wuxuu bartaa inuu jiran yahay. Ama khasaaro. Doorasho kale waa jariimka uu madaxweynuhu ku xiran yahay oo uu bilaabayo inuu ku hanjabo qoyskiisa. Sidoo kale, dadka waaweyn ee guursaday oo leh dhalinyaro, nacasyo nacas ah ayaa iman kara. Qaar ka mid ah si lama filaan ah waxay u arkaan in ay kufilanayaan noloshooda dhalinyarada oo ay si lama filaan ah ugala baxaan oo aan la raadineynin, iyada oo rajeyneysa in nimcada carada leh ay illoobi doonto isla markiiba oo sax ah haddii ay dareemeyso qulqulo qoto dheer.
Horumarinta sii socota ee dhacdooyinka badanaa waxay kuxirantahay dabeecaddaada. Haddii ay naftu u baahan tahay ficil firfircoon - raadso, ogow, isku day inaad hadasho. Laakiin bilawga hore, waa inaad ogaataa in aadan adigu sameynin si aad u soo celiso, laakiin si aad u ogaato in wax walba ay yihiin. Ujeedo kale waa mid aan caadi ahayn, oo ay u badan tahay, waxay kuu keeni doontaa xanuun badan. Haddii aad ogaato oo ay soo baxdo in lumitaankaagu uu nool yahay oo si fiican yahay, ha isku dayin inaad soo celiso. Gardaro, cadaadis xagga damiirka, gardarrada, ilmo (dhacdoon ahaan, sidoo kale muujinta gardarrada) hadda murugo ma caawin doonto. Ha ku dhajin dhibicda ugu dambeysa ee sheekadan. Fursada in la waayay waxay ku dhowdahay had iyo jeer. Inta badan dhiirigelinta, ikhtiyaarka soo noqoshada ayaa suurtagal ah - waxay kuxirantahay dabeecadaha shakhsiga, iyo sidoo kale horumarinta xaaladda isbarbar dhigga. Xilligan la joogo waa arrin aad muhiim u ah in aan la galin ficilo, mana aha in la yiraahdo ereyada gaabinaysa isaga oo maraya waddada dib loo soo celiyo. Haddii, dabcan, waxaad rabtaa inuu ku soo noqdo. Si aad u fahamto sababta keentay waxa ugu wacan ugu yaraan si aan dib ugu dhicin isla wakhti kale. Markaad fahamsan tahay habdhaqanka iyo dhiirigelinta ujeedada u ah dabeecadda soo baxday, waxaad awoodi doontaa inaad wax ku ogeysiiso waqtigii xiga. Waxa ugu muhiimsan waa in la barto in aanay tani ahayn adiga, laakiin dhibaatadeeda. Waxaa habboon in aad si dhab ah uga fikirto naftaada, haddii kuwa aad dooratay, aamusnaanta, hal mid u baaba'o. Si kasta oo ay arrimuhu u kobcaan, is-xakameyntaada iyo rajadaada waxaa lagu qiimeeyn doonaa qofka ajnebiga ah ama kuwa kale. Iyo, ugu muhiimsan, ha lumin xushmeynta naftaada. Dhimashada qof la jecel yahay ma aha mid la mid ah luminta naftiisa. Tani waa muhiim in la xasuusto xitaa waqtiyada ugu daran. Naftaada u sheeg: sida fiican, maxay fursad weyn u tahay in wax walba laga bilaabo bilowga, ma aha qof kastaa nasiib daran! Qodob kale oo muhiim ah waa cafis. Waad dhaafi kartaa - waad necbaan kartaa oo aad u guuri kartaa. Caawimadu waxay noqon kartaa xusuus wanaagsan oo ku saabsan munaasabadahaagii hore. Fiiri sawirada sawirrada, ka fakar intee in le'eg ee uu qofkani ku siiyay, imisa ayuu kugu baray. Maalmahan cajiibka ah ama sanadka aad wada wadaagteen. Xasuuso ugu fiican. Waad ku mahadsan tahay. Oo isna ha iska tago. Sheekada ha joojiso. Xaqiiqadani waxay dhacdey iyada oo aanad ka qaybqaadan, iyo dhammaan wixii aad qaban kartid waa aqbalaan oo ku noolaadaan.
Talooyin yar oo ku saabsan sida loola jeeda lover
Ma jiraa jaceyl weligeed ah?
Raadinta khuraafaadka ku saabsan guurka
Sida loo aaminsan yahay jacaylka
Laabashada iyo cilaaqaadka qaangaarka ah
Sida loo guuleysto oo loo ilaaliyo xirfad dhab ah?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku laabto lover
Alexei Chumakov, war-saxaafadeed
Cunto leh saytuunka
Waxyaabaha mamnuuca ah: waxa aan la siin karin carruurta
Xeerarka aasaasiga ah ee xiriirka isboortiga
Sababta ilmo-galeenka uusan qandaraas ugu dhicin
Salad Mimosa - Qayb ka mid ah cuntooyinka qasacadaysan, salmon baraf, sardines, bariis iyo farmaajo - qaacidada tallaabo tallaabo tallaabo leh oo sawir leh
Salad "Yellow Sun"
Kalluumeysiga jiiska iyo roodhida ricotta
Nolosha shakhsiga ah ee Dmitry Nagiyev. Sawirrada haweenka, muusikada iyo wiilka
Dhaqanka sawir ee sawirka
Lolita ee guud ahaan hufan ayaa noqday xiddigga internetka
Pumpkin iyo alaabta daawooyinka, cuntada sida caadiga ah
Designer for carruurta
Waxa la siinayo dhalinyaro ka timaadda faashadda
Hababka dadweynaha ee daaweynta cataract
Horoscope for Aries-haweenka bilaha November 2016
Broccoli waxay caleen kaabash